Baabuurta Volvo oo xayawaanka ka istaagi doona | Somaliska
Baabuurta ay sameyso shirkada Volvo ayaa lagu sameynayaa aalad casri ah oo haddii xayawaan uu wadada goynayo si iskood ah isi joojin doona. Arintaa ayaa looga gol’leeyahay in la yareeyo shilala xayawaanka iyo baabuurta oo sanadka ka badan 47,000.
Baabuurta casriga ah ee ay sameyso shirkada Volvo ayaa hada waxay leeyihiin aalad joojineysa baabuurka haddii qof uu wadada goynayo. Iyadoo taas lagu siyaadin doono xawaanka sida lagu sheegay warsaxaafadeed ay soo saartay shirkada Volvo.
Quburada Volvo ayaa si ay u fahmaan sida uu u shaqeeyo dareenka xayawaanka waxay baaritaan ku sameeyeen goobaha lagu xanaaneeyo xayawaanka. Aalada lagu sameyn doono gaadiidka Volvo ayaa shaqeyn doona marka baabuurka uu ku socdo xawaaraha caadiga ah ee loogu tala galay wadooyinka baadiyaha.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa dhacay 47,000 oo shilal la xiriira xayawaanka.